XOG XASAASI: Wakiilka QM ee Somaliya ‘Swan‘ oo shaaca ka qaaday arrin muhiim ah oo uu kala hadlay ‘Muuse Biixi’ intii uu joogay Hargeysa! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG XASAASI: Wakiilka QM ee Somaliya ‘Swan‘ oo shaaca ka qaaday arrin...
XOG XASAASI: Wakiilka QM ee Somaliya ‘Swan‘ oo shaaca ka qaaday arrin muhiim ah oo uu kala hadlay ‘Muuse Biixi’ intii uu joogay Hargeysa!
Muqdisho (Halqaran.com) – Ergeyga gaarka ah ee xoghayaha Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Swan ayaa golaha amaanka uga warbixiyay safarkii uu bishii hore ku tagay magaalada Hargeysa.
Danjire James Swan ayaa golaha u sheegay in uu Madaxweyne Muuse Biixi kala hadlay sidii dib loogu furi lahaa wada-hadalada mudada badan hakadka galay ee Somaliland iyo Soomaaliya.
Mr. Swan ayaa ka dhawaajiyey in wada-hadaladaasi la sii wado si aan loo lumin dadaaladii ay ku bixiyeen xukuumadihii ka horeeyay madaxda talada haysa.
”Waxaan booqday Somaliland 27 ilaa 28-kii July ee la soo dhaafay waxaan la yeeshay Madaxda Somaliland wadatashiyo isbarasho ah”, ayuu yiri James Swan.
Wakiilka gaarka ah ee QM ee Soomaaliya, ayaa intaas ku sii daray ”Waxaan ku dhiirigeliyey in la sii wado wada-hadalka u dhexeeya Hargeysa iyo Muqdisho si looga gun gaadho dedaaladii hore”.
Madaxweyne Muusi Biixi
Wakiilka gaar ah